စျေးပေါသောအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာကိုယ်တိုင်မောင်းနှင်သည့်ဘီးအမျိုးအစားဆွေးလည်စက်စက်နှင့်စက်ရုံ။ | YiZheng
ဘီးအမျိုးအစားဆွေး Turner စက် သဘာ ၀ ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံများ၊ ဒြပ်ပေါင်းဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံများတွင်သတ္တုမြေသြဇာစက်ရုံများတွင်ကန့်လန့်ခြင်းနှင့်ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်းတို့တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ , ရွှံ့နွံနှင့်အမှိုက်သရိုက်စက်ရုံများ, ဥယျာဉ်ခြံများနှင့်ဘစ်စမတ်အပင်များ။
ဘီးအမျိုးအစားဆွေး Turner စက်ကဘာလဲ?
ဘီးအမျိုးအစားဆွေး Turner စက် အကြီးစားအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်စက်ရုံအတွက်အရေးပါသောကစော်ဖောက်ခြင်းကိရိယာဖြစ်သည်။ လူတစ် ဦး တစ်ယောက်တည်းဖြင့်လည်ပတ်သောဘီးဆွေးတာနာသည်ရှေ့သို့နောက်သို့ရွေ့။ လွတ်လပ်စွာလည်ပတ်နိုင်သည်။ ကြိုတင် stacked တိပ်компостအထက်ဘီး composting ဘီး; ထွန်စက်ထိန်သိမ်းအောက်ရှိခိုင်မာ။ အလှည့်ကျသည့်ဘုံ၌တပ်ဆင်ထားသောအလှည့်ကျသောဓါးများသည် stack stacks များကိုရောနှောခြင်း၊
ဘီးအမျိုးအစားဆွေး Turner စက်၏လျှောက်လွှာ
ဘီးအမျိုးအစားဆွေး Turner စက် အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံများ၊ ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံများ၊ ရွှံ့နွံများနှင့်အမှိုက်သရိုက်စက်ရုံများ၊ ဥယျာဉ်ခြံများနှင့်မှိုပင်များကဲ့သို့အချဉ်ပေါက်ခြင်းနှင့်ရေဖယ်ရှားခြင်းလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။
၁ ။ ဘီးအမျိုးအစားဆွေး Turner စက် ရှေ့သို့နောက်သို့ချီ။ လွတ်လပ်စွာလှည့်နိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားရွေ့လျားမှုအားလုံးကိုလူတစ် ဦး တည်းကထိန်းချုပ်သည်။
၂။ ဇီဝအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများကိုမြေပြင်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများတွင်ချွတ်ပုံသဏ္ဌာန်ဖြင့် ဦး စွာပုံဖော်သင့်သည်။
3. Compost Turner သည်ကြိုတင်ပုံဖော်ထားသည့်အပေါင်ခံဆွေး၏အထက်တွင်ရှိနေခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ လယ်ထွန်စက်ထိန်သိမ်းအောက်ရှိခိုင်ခံသော rotary drum တွင်တပ်ဆင်ထားသောလှည့်ဓါးများသည်ပုံတူဆွေးကိုပေါင်းစပ်ရန်၊
4. လှည့်ပြီးနောက်, အသစ်သောချွတ်ဆွေးပုံဖွဲ့စည်းသည်နှင့်အချဉ်ပေါက်ဆက်လက်စောင့်ဆိုင်း။
5. ဒုတိယအလှည့်အဖြစ်ဆွေးအပူချိန်ကိုတိုင်းတာရန်ဆွေး thermometer ရှိပါသည်။
ဘီးအမျိုးအစားဆွေး Turner စက်၏အားသာချက်များ
1. မြင့်မားသောလှည့်အတိမ်အနက်: အတိမ်အနက် 1.5-3m;
2. အကြီးစားလှည့်ပတ်: အအကျယ်ဆုံး 30m နိုင်ပါတယ်;
၃။ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနိမ့်ခြင်း။ ထူးခြားသောစွမ်းအင်ထိရောက်သောထုတ်လွှင့်မှုယန္တရားကိုအသုံးပြုပါ။ တူညီသောလည်ပတ်မှုပမာဏ၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည်ရိုးရာအလှည့်ကိရိယာများထက် ၇၀% ပို၍ နည်းသည်။
၄။ အလှည့်ကျထောင့်မရှိသောအလှည့် - အလှည့်အပြောင်းသည်မြန်ဆန်မှုနှင့်အတူ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးပြောင်းရွေ့သောတွန်းလှည်း၏အောက်တွင်သေနေသောထောင့်မရှိပါ။
၅။ အလိုအလျောက်မြင့်မားသောဒီဂရီ - အော်ပရေတာမလိုအပ်ဘဲ Turner အလုပ်လုပ်သောအခါအပြည့်အဝအလိုအလျောက်လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်သောစနစ်တပ်ဆင်ထားသည်။
ဘီးအမျိုးအစားဆွေး Turner စက်ဗီဒီယိုကိုပြသခြင်း
ဘီးအမျိုးအစားဆွေး Turner စက်မော်ဒယ်ရွေးချယ်ရေး
၅.၅ * ၂
၂.၂ * ၄
ရှေ့သို့ အလျားလိုက်အချဉ်ဖောက် Tank
နောက်တစ်ခု: နှစ်ဆဝက်အူဆွေး Turner
နိဒါန်း Double Screw Composting Turner Machine ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ မျိုးဆက်သစ် Double Screw Composting Turner Machine သည် ၀ င်ရိုးပြောင်းပြန်လှည့်မှုလှည့်ပြောင်းမှုကိုတိုးတက်စေသဖြင့်လှည့်ခြင်း၊ ရောနှောခြင်းနှင့်အောက်စီဂျင်ရရှိခြင်း၊ အချဉ်ဖောက်ခြင်းနှုန်းကိုတိုးတက်စေခြင်း၊ လျင်မြန်စွာပြိုကွဲခြင်း၊
နိဒါန်း Chain Plate Composting Turner စက်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ Chain Plate Composting Turner Machine တွင်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဒီဇိုင်း၊ မော်တာကိုစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပြီးဂီယာအတွက်ကောင်းမွန်သောမျက်နှာမျက်နှာဂီယာလျှော့ချခြင်း၊ အဓိကသော့ချက်များမှာကွင်းဆက်သည်အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးအကြမ်းခံသောအစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုသည်။ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်အား ...